တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ပန်းတပွင့်တောင်မှ ... ဆရာလေးကြည်ဖြူ ကျောင်းသို့ ....
Posted by မေဓာဝီ at 8:02 PM
တကယ့်ကို အဖိုးတန်တဲ့ နှမ်းတစ်စေ့၊ ကြယ်တစ်ပွင့်၊ မှင်တစ်စက်ပဲ ။
9/20/2013 1:57 AM
တခါတလေ အဲ့ဒီ မပြည့်နိုင်တဲ့ အိုးတွေဟာ များလွန်းလို့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖြည့်ပေးရမလဲ ပူပင်ကြောင့်ကျမိတယ်။ အရင်တုန်းကလည်း တနိုင်ပတ်ဝန်းကျင်က ကလေးတွေကို စာသင်ပေးဖူးတယ်။ နောင်တချိန် အခွင့်သာတဲ့အခါ သစ်ပင်စိုက်သလို အဖူးအပွင့်လေးတွေ ပြုစုပျိုးထောင်ရတဲ့ အလုပ်မျိုးကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်သွားချင်ပါတယ်
ပန်းတစ်ပွင့်တောင် မရောက်ခဲ့ရပေမဲ့ ပညာဒါနဝေနေတဲ့ ဆရာလေးနဲ့ဆုံးခဲ့ရတာက အမြတ်ပါပဲ မမေရေ..။ ဖတ်ရင်း ကြည်နူးကြက်သီးထမိတယ်။ ဆရာလေးရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ခံယူချက်တွေက အံ့နဘမ်းပါဘဲနော်။
9/20/2013 5:20 AM
မမေ ဘယ်ရောက်နေပြန်ပြီလဲ...ဟိုတစ်နေ့က အင်တာနက်ဂျာနယ်မှာ ဘလော့ဂါဒေးအကြောင်းရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးကိုဖတ်ကြည့်ရင်း မမေဓာဝီဆိုတဲ့နာမည်ပါလာတော့တောင် သတိရမိပါသဗျား...
အပြောပဲရှိပြီး အလုပ်နည်းနေကြတဲ့ ဒီတိုင်းပြည်ကြီးမှာ အသံတိတ်တိတ်ဆိပ်ဆိပ်နဲ့ ကိုယ့်လမ်းစဉ်ကို မယိမ်းမဖဉ်သွားနေတဲ့လူတွေ အများကြီးပါ မမေ...ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားဖို့ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်...ဒီလိုလူတွေဆီ အရောက်သွားခဲ့တာ ကျေနပ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်...
9/20/2013 9:33 AM
စိတ်ဝင်စားစရာ သာဓုခေါ်စရာ ပဲ မမေ
9/20/2013 10:00 AM
After all I willl be subscribing in you rss feed and I hope you write again very soon!
Heree is my homepage ... blogging make
9/20/2013 7:51 PM
မမေရေ... လေးစားကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးတခု လာ ဖတ် သွားတယ်နော် သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ။
9/20/2013 11:53 PM
ဆရာလေးကြည်ဖြူရဲ့လုပ်ဆောင်ရပ်တွေက လေးစားချီးကျူးဖို့ကောင်းလိုက်တာ..
9/21/2013 12:47 AM
လောက အတွက် အကျိုးရှိတဲ့ ... ကိုယ့် ဘက် က အပေးနိူင်ဆုံး ပေးဆပ်သူတွေ ...
9/21/2013 6:22 AM
ခရောင်းလမ်းမှာ အရောင်အဆင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီး ရနံ့သင်းပျံ့တဲ့ ပန်းတွေကို ဆွတ်ခူးခဲ့တာပေါ့နော်။
9/21/2013 4:38 PM
ဆုံစည်းဖို့ ဇာတာပါလာတော့လည်း ကား အဲကွန်းပိတ်၊ မှန်တံခါးကို ချထားတဲ့အချိန်နဲ့ ကလေးတွေ စာအံချိန်နဲ့ ကွက်တိဖြစ်သွားတော့ တာပဲ၊ မှန်တံခါးလည်း ပိတ်ထား၊ ကလေးတွေကလည်း တိတ်ဆိတ် နေကြမယ် ဆိုရင် အဖိုးတန်ကျောင်းကလေးနဲ့ တေ့လွဲ၊ လွဲချင် လွဲနေဦးမှာနော်...၊း)
ကျောင်းကလေးက ပိစိလေးပေမယ့် အထဲက ဆရာလေးရဲ့ မေတ္တာ၊ စေတနာ တွေကတော့ ကြီးမားလိုက်တာ..၊ ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးတွေ၊ အဆောင်အယောင်ကြီးတွေ တစ်စက်မှ မရှိဘဲ သူကျင်လည်ရာ ဝန်းကျင်လေးကို တတ်နိုင်သလောက် ထွန်းညှိပေးနေတဲ့ ဆရာလေးကြည်ဖြူကို လေးစားမိပါတယ်...၊ ကလေးတွေနဲ့ နောက်တစ်ခေါက် သွားဖြစ်အောင်သွားပြီး အဲဒီအကြောင်းကိုလည်း ဘလော့ဂ်မှာ ပြန်မျှဝေပါဦး မမေရေ..။
(ဒီရက်ပိုင်း တော်တော်လေးကို အလုပ်များနေလို့ အများကြီး နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာရတယ် မမေ...)
9/27/2013 10:04 PM
ထူးခြားလိုက်တာမေရေ. ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာ. တကယ်လ်ုအပ်တဲ့ကလေးတွေကိုပညာအမွေပေးနေတဲ့ဆရာလေးစေတနာက ကြီးမြတ်လိုက်တာ
လောကကောင်းကျိုးကို ကိုယ်ကျိုးစွန့်ကြိုးပမ်းနေသူတစ်ဦးကိုလေးစား ကြည်ညိုမိပါတယ်..... ခရီးလမ်းကြမ်းပေမယ့် ကိုယ်ရလိုက်တဲ့ ကြည်နှုးပီတိတွေက အမောပြေပြီးနောက် သွားမယ့်ခရီးတွေအတွက် အားမာန်တွေဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ် အားလည်းပေးပါတယ်ဗျာ
လူမှုရေးဆိုတာ ခဏတစ်ဖြုတ်သာ လွယ်ပေမယ့် ရေရှည်လုပ်ဖို့ကျ တော်ရုံဇွဲမျိုးတော်ရုံစိတ်မျိုးနဲ့မရဘူး လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းလေးစားတယ် ။ ဆရာလေးကြည်ဖြူကျောင်းတဲ့ နာမည်လေးကတင် စေတနာတွေ ယိုစီးလာသလိုပဲ .။
ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ထားဖြစ်လို့ ပန်းတစ်ပွင့်တောင်ဖက်သွားရင်း ဆရာလေးကြည်ဖြူကျောင်းကို ၀င်ရောက်လှုဒါန်းဖြစ်ခဲ့တယ်။
1/01/2014 12:27 PM